Ahoana ny fomba hisafidianana anti-bakteria, fanadiovana ary fanadiovana tanana?
Diniho bebe kokoa ny fonosana rehefa mividy fanadiovan-tanana. Amin'ny ankapobeny, ny atin'ny alikaola dia voamarika eo. Ny tsara indrindra dia 75%. Tsy soso-kevitra ny fisafidianana 90% na 95% fanjifana alikaola noho ny fifantohana ambony dia hamorona pro ...
Ny fitsipiky ny famonoan-tena amin'ny alikaola
Alikaola miaraka amin'ny fahaizana lehibe hidirana amin'ny membrane amin'ny velaran'ny bakteria ary hiditra ao anaty bakteria. Famonoana ireo bakteria amin'ny alàlan'ny tsy fahampian-drano, famokarana ary famoahana proteinina izay fototry ny fiainana bakteria. Ny viriosy dia voaforon'ny vady genetika ...
Ny faritanin'i Shanxi dia hampiroborobo tanteraka ny lasantsy etanol ho an'ny fiara manomboka amin'ny taona 2020
Voalaza fa mba hanatsarana bebe kokoa ny firafitry ny angovo, hampihena ny loto mandoto ny fiara, ary hanatsara ny tontolo iainana, manomboka amin'ity taona ity, ny faritanintsika dia hampiroborobo ny fampiasana lasantsy etanol ho an'ny fiara manerana ny faritany mifanaraka amin'ny .. .
Ny National Energy Administration dia manadihady ny fampiroboroboana sy ny fampiasana lasantsy etanol ho an'ny fiara (10 apr. 2019)
Taorinan'ny 26 Febroary 2019, ny National Energy Administration dia nanao fiaraha-miombon'antoka amin'ireo orinasa etanol biofuel ao Beijing mba hihainoana ny hevitry ny orinasa; tamin'ny fiandohan'ny volana martsa dia namoaka informa ny Sampan-draharaha misahana ny fitantanan-angovo nasionaly ...